Ny iPad Air ao anatiny dia misaotra an'i iFixit | Vaovao IPhone
Ao anatin'ny iPad Air misaotra an'i iFixit
Vaovao IPad | | iPad Air, About us
Omaly, na dia fialantsasatra aza, omaly Nisokatra ny fivarotana Apple hametrahana ny iPad Air izay nanolotra ny 22 lasa Oktobra tany San Francisco.
Toy ny fanao amin'ny Apple, ny tovolahy avy iFixit dia nahatratra ny fitaovana esory tanteraka izy io ary zahao ny fomba fanangonana ireo singa. Mahaliana hatrany ny fahalalana ireo singa mandrafitra azy hahitana raha misy ny mety fanamboarana na tsia. Izy ireo dia natokana ho amin'izany iFixit.
Ny isa azon'i IFixit dia 2 amin'ny 10. Ny hany zavatra tsara momba ny iPad Air raha ny fanamboarana dia izany Ny efijery LCD sy ny vera fonosiny dia singa samihafa, noho izany ny fanovana azy dia mora raha mijaly amin'ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny efijery toy ny vaky na triatra ny fitaovana.
Ny amponga dia singa mampihena ny naoty. Tsy noho ny lasitra mahazatra an'ny iDevies rehetra ao amin'ity sombin-javatra ity ihany fa noho ny ny habetsaky ny lakaoly ka tsy hiala eo amin'ny toerany. Mandrosoa, voaisy tombo-kase tanteraka amin'ny vatan'ilay fitaovana. Ireo mpitifitra iFixit dia nilaza fa ilay fitaovana no lafo indrindra hanalana ny bateria. Maro amin'ireo faritra mandrafitra ny iPad Air no tena mitovy amin'ireo mamorona iPhone 5 vaovao.
Amin'ity isa ambany dia ambany ity, avy amin'ny iFixit dia manoro hevitra anay izy ireo ario ny fitaovana ary mividiana vaovao ho anay raha miaritra fahasimbana izahay ary ny iPad dia efa ivelan'ny fe-potoana fandrakofana. Ny mazava amintsika dia zavatra iray, Apple tsy te-hanokan-tena hanandrana hanamboatra ny fitaovan'izy ireo, izany no tanjon'izy ireo.
Ny iPad Air nahazo naoty mitovy fa tamin'ny fotoana avy amin'ny iFixit dia nomen'izy ireo ny iPad Mini, izay singa tokana azo ovaina ihany koa dia ny efijery LCD sy ny vera manarona azy.
Fanazavana fanampiny - Azonao atao izao ny manafatra ny iPad Air
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Ao anatin'ny iPad Air misaotra an'i iFixit
Very hevitra aho, milaza ny sasany fa tsara ny rivotra iPad, ary iray hafa mahatsiravina ... Misy hevitra marina ve? PDD: Manoratra aho rehefa mivoaka ny masony afovoany.
Andao jerena ... mahatsiravina? Tena tsy marina. Tsara? azo antoka. Ny tsara indrindra? Miankina amin'ny zavatra tadiavinao izany, ho ahy eny, ho an'ny namako sasany, koa, ho an'ny namako hafa, tsia. Ny iPad Air dia manana ny niainany ny iPad nandritra ny androm-piainany tamin'ny heriny bebe kokoa. Efa nanandrana iPad ve ianao? Tsara kokoa ity iray ity: kely kokoa, maivana kokoa, matanjaka kokoa, mizaka tena ihany.
Mendrika ny fanovana ve izany? Arakaraka. Tsy hanova ny iPad 3 nataoko aho satria ny vadiko sy ny zanako kely dia mampiasa azy ary tsy mendrika ho ahy ny manova azy, satria faly noho izy ireo izy ireo. Na eo aza izany dia hanova ny iPad Mini-ko aho, azo antoka fa ho an'ny iPad Mini Retina, na dia afaka mihatratra aza ity Air ity… tsy haiko.
Manantena aho fa nanampy anao XD
Mendrika ve ny mividy ny iPad mini 2 na ny rivotra iPad raha mbola tsy manana ipad ianao?
Inona no holazainay aminao amin'ny pejy natokana ho an'ny iPad? XD Azo antoka fa !!!! HAHAHA. Mini sa lehibe? Miankina amin'ny teti-bolanao izany, raha vitanao ilay lehibe dia hiakatra aho, tsy misy fahasamihafana be loatra amin'ny lanjany na habe, ary lehibe kokoa ny efijery, tsara kokoa.
& rahoviana no tonga any amin'ny orinasa toy ny carrefour na haino aman-jery ireo iPads ireo? Eto Seville dia tsy misy Apple Stores ary tsy afaka mitsapa azy ireo mivantana aho, ary nandeha nankany amin'ny faritany hafa nankany amin'ny fivarotana Apple aho
Ao amin'ny El Corte Inglés dia efa anananao ireo, mba hahafahanao manandrana azy ireo tsy misy olana.
Ny fitsipiky ny anglisy dia somary feno fotony noho Carmen Lomana manambara ny Burger King, tsy misy trano hafa?
Raha te hanandrana ianao dia maninona no tadiavinao bebe kokoa? Ny maha any Seville dia azo antoka fa be kokoa ny magazay Informatica ananany.
Inona no maha samy hafa an'ity iPad ity sy ilay mini iPad taloha? ny faha-1 lazaiko ... ary inona no hitranga raha 32 sombina?
Ny tsy fitovizany dia ny efijery (ilay teo aloha tsy retina ary ity iray ity) sy ny herinaratra (mpanodina A7 mahery tahaka ny an'ny iPad Air).
Raha mividy ny rivotra iPad na ny ipad mini 2 aho, aiza no amporisihanao hividy azy? Ny tiako holazaina dia milaza izany ho fiantohana ary ...
Ny torohevitro dia ny handehananao any amin'ilay "fivarotana curte" lazainao hoe El Corte Inglés, satria amin'ny € 60 ianao dia mahazo fiantohana mandritra ny 2 taona izay manarona ny fahasimbana tsy nahy mety hanananao.
& ao amin'ny magazay Apple tsy ataony aminao izany? Misy lozam-pifamoivoizana manarona ahy ve?
Tsia, tsy ao amin'ny App Store. Loza rehetra eny, raha mbola loza izany.
mb dia hoy izy:
Ny antony dia noho ny antony iray, efa nandre fanakianana ratsy momba ny iPad ve ianao? Mazava ho azy fa ny hevitr'i Luis, inona no holazain'izy ireo aminao eto, mazava ho azy fa vidio, raha azo atao, na maka iPhone aza ...
Saingy mila izany amin'ny diarinao ianao? Raha eny ny valinteninao dia tohizo fa tsy noho ny valinay, fa noho ny faharesen-dahatrao.
Handinika an'ity iPad ity ve ianao? Te hahafantatra aho fa haingana dia tsy toy ny ipad hafa io
Raha misy eo am-pelatanantsika ny olona iray, azo antoka, fa na izany aza ny fitsapana natao dia miresaka momba ny fanavotana 3 heny kokoa noho ny iPad 4.
Valianao foana ve ny zava-drehetra? xd tiako holazaina, tsy manalavitra ny efijery ve ianao?
Mahafinaritra ny iPhone-ko !! XD
Ny iPad no tablette »mahery» matanjaka indrindra »misy ankehitriny satria manana 64 bits? Inona ny rivotra ipad an'ny "vaovao"? Tapa-kevitra ny hividy azy aho, saingy mila fanosehana sy faniriana bebe kokoa ...
Tsy azo valiana amin'ny fanehoan-kevitra izany. Azoko atao ny manomana lahatsoratra iray momba ny antony hividianako iPad fa tsy ny takelaka hafa. Fa izany no ho hevitro, zarain'ny sasany fa tsy ny hafa.
Tsara raha mino izany ianao, tsy nahita lahatsoratra momba an'io aho ary very hevitra
Betsaka na kely oviana ianao no afaka namorona azy?
Eo aho 😉
Heveriko fa ny zava-baovao indrindra nampitahainy tamin'ny fifaninanana dia ilay 64-bit processeur sy ny lanjany maivana. Tsy misalasala aho fa amin'ny fifaninanana dia misy takela-by tena maivana, saingy mieritreritra aho fa amin'ny fahefana / portability no tsara indrindra. Etsy ankilany, ny iOS 7.0.3 dia mihazakazaka tsara amin'ny iPad taranaka fahefatra ka heveriko ihany koa fa hahomby ihany koa na ho tsara kokoa amin'ny iPad Air, ny fahavoazana hitako dia ny vidiny ambony, saingy heveriko fa raha ianao Na mividy izany na tsia dia tokony hiankina bebe kokoa amin'izay tianao hatao amin'izany, satria raha hiara-miasa aminy ny tanjona dia heveriko fa misy safidy tsara kokoa amin'ny fifaninanana, ankehitriny ho fitaovana fialamboly, lalao ary ho an'ny asa «mahazatra» dia heveriko fa fitaovana tena tsara io.
PS: Tsy milaza aho fa ny iPad dia tsy azo ampiasaina amin'ny asa, fa raha ho an'ny asa "madio sy mafy" dia heveriko fa ny takelaka misy Windows 8 (tsy RT) dia manome vokatra bebe kokoa. (hevitra manokana)
Heveriko ho fahadisoana ny fividianana ny Surface Pro amin'ny iPad. Fitaovana roa samy hafa izy ireo. Ny Pro dia solosaina, ny iPad tsy, miaraka amin'ny tombony sy fatiantoka amin'ny fitaovana roa.
Mazava ho azy, tsy mampitaha azy ireo aho, milaza fotsiny aho fa misy olona indraindray manontany ahy momba ny takelaka ary milaza amiko fa te hiara-hiasa aminy izy ireo ary amin'izany no heveriko fa ny takelaka misy Windows 8 toa ny Surface dia tsara kokoa ho an'ny ny antony mitovy lazainao ihany dia saika solosaina io. Ohatra, tsy tiako ny takelaka miasa, tiako ny manamarina ny tambajotra sosialy, milalao lalao, miserasera amin'ny Internet, angamba manamarina na manoratra mailaka vitsivitsy ary ho an'ireo zavatra ireo (ary maro hafa) hitako fa tsara (ankoatr'izay tena tiako ny famolavolana sy ny iOS), tsy hanova ny iPad-ko ho an'ny Surface aho, fa noho io antony io ihany koa, tiako kokoa izany amin'ny sehatry ny fialamboly ary tokony hofaritana tsara aloha izay tadiavin'izy ireo hampiasaina 🙂
Heveriko koa izany
Jordi dia hoy izy:
«Inona koa no vidiny» ...
Valiny tamin'i Jordi
Alberto Gil Pichardo dia hoy izy:
Salama, manana ipad digitizer tapaka aho fa tsy misy fiatraikany amin'ny LCD izany. Nanapa-kevitra ny hanamboatra azy irery aho fa tsy mahita horonantsary manokana momba ity ipad ity, raha misy olona eto manana traikefa momba an'io ary afaka manampy ahy amin'izany mba tsy hampidirako azy dia tiako izany! ny mailako dia «silversurfer21001@gmail.com»
Valiny tamin'i Alberto Gil Pichardo
Apple dia namoaka ny fivarotana an-tserasera any Torkia: miantsena sy miantsena!
SpringFlash: ampiasao ho toy ny jiro (Cydia) ny tselatra ny fitaovana ampiasainao